Kwadebe nkwekọrịta mmezi? Anyị nwere ike inyere gị aka
Iwu ụlọ ọrụ » Nkwekọrịta obibi
Nkwekọrịta idozi bụ nkwekọrịta pụrụ iche. Na nkwekọrịta mmezi, ndị otu chọrọ ime nkwekọrịta gbasara mkpebi esemokwu ma ọ bụ ọnọdụ ọzọ edoghị anya. Ọ bụkwa nkwekọrịta nke onye were mmadụ n'ọrụ na onye ọrụ ya nwere ike iji obi ya, site na nkwekọrịta, mechie nkwekọrịta ọrụ.
UPD A AH A EGO?
NSOGBU EGO NA-EGO
Nkwekọrịta idozi bụ nkwekọrịta pụrụ iche. Na nkwekọrịta mmezi, ndị otu chọrọ ime nkwekọrịta gbasara mkpebi esemokwu ma ọ bụ ọnọdụ ọzọ edoghị anya. Ọ bụkwa nkwekọrịta nke onye were mmadụ n'ọrụ na onye ọrụ ya nwere ike iji obi ya, site na nkwekọrịta, mechie nkwekọrịta ọrụ. Enwere ike ikwubi nkwekọrịta maka ụdị esemokwu niile, mana a na-ejikarị okwu nchụpụ.
Gịnị bụ nkwekọrịta mmezi?
Mgbe emechara nkwekọrịta nkwekọrịta, onye were ya n'ọrụ agaghị enweta ikike maka ịchụpụ onye ọrụ ya na Agencylọ Ọrụ Nlekọta Ndị Ọrụ Were Ọrụ (UWV) ma ọ bụ n'ụlọ ikpe mpaghara. Nke a bụ ihe dị mkpa mere ndị na-ewe mmadụ n’ọrụ na ndị ọrụ ụfọdụ ji nwee ike ịkwụsị ọrụ nkwekọrịta na mgbakwunye nke nkwekọrịta ọnụ. Ihe ọzọ dị mkpa kpatara ị ga - eji họrọ nkwekọrịta bụ maka na ịkwụsị ọrụ nkwekọrịta nwere ike ịhazi ya ngwa ngwa. Nke a na-eweta oke ọdịiche na ụgwọ iwu yana ọ bara uru maka akụkụ abụọ a. Agbanyeghị, ọ dị mma karịa ka akụkụ abụọ ahụ nwee nkwekọrịta site na nkwado nke ọka iwu. Youchọrọ ịme nkwekọrịta nke ga-egbochi nsogbu nsogbu n'ọdịnihu? Biko kpọtụrụ Law & More.
Rịba ama nke ndabara
Ọ bụ na mmadụ anaghị emezu nkwekọrịta ha? Anyị nwere ike izipu ihe ncheta na ịgba akwụkwọ
Ill dụ arụ
Ezigbo nchọpụta nchọpụta maka ịchọpụta ihe dị mma. Anyị na-enyere gị aka
Nkwekọrịta onye nwe ya
Youchọrọ ịme iwu dị iche iche maka ndị gị na ha nwere ihe mgbakwunye na isiokwu nke mkpakọrịta gị? Rịọ anyị maka enyemaka gbasara iwu
"Law & More abuana
ma nwee ike ọmịiko
ya na onye ahịa ya ”
Ọdịnaya nke nkwekọrịta mmezi
N’ime nkwekọrịta, a ga-edobe ọnọdụ nke ejedebe nkwekọrịta ọrụ. Ihe dị n’ime nkwekọrịta nkwekọrịta dabere na ọnọdụ na ọnọdụ a kapịrị ọnụ. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe na-achịkwa mgbe niile. Nke mbu, ụbọchị nkwụsị bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke nkwekọrịta mmezi. Nke abuo, oge ngosi agha aghaghi ime ya. N’ikpeazụ, a ga-eme nkwekọrịta gbasara oge ọrụ nke ga-adịgide ruo ụbọchị nkwụsị. O kwere omume na oge nkwekọrịta maka ọrụ anabatara. N'ọnọdụ ahụ, onye ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ, mana ikike ya ịkwụ ụgwọ ga-anọ.
Enwekwara ike ịme nkwekọrịta gbasara ego edeturu pụrụ iche na ebe ndị ọzọ dị iche iche, dị ka komputa, atụmatụ ego ma ọ bụ atụmatụ nkekọrịta. Na mgbakwunye, ego nke mgbanwe mgbanwe a na-ekpebi na mkparịta ụka dị n'etiti onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ ahụ ga-edobe na nkwekọrịta idozi. Ego a na-enweta na ntughari ga-abụkarị mkparita uka ma dịkwa mkpa. Ya mere, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịchọ enyemaka nke iwu n'okwu a. Ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Ọnọdụ gbasara nkwekọrịta mmezi
Ntinye aka na uru adighi oru
Nkwekọrịta ndozi ga-ekwuputa oge niile na onye were ya n'ọrụ ebutela ọrụ ahụ. Onye ọrụ ahụ agaghị abụ onye na-enweghị ọrụ. Nke a dị mkpa iji wee nwee ike ịnata ụgwọ ọrụ maka onye ọrụ. A ga-emerịrị ọnọdụ ndị a iji hụ na onye ọrụ kwesịrị ịnata ụgwọ ọrụ na-enweghị ọrụ:
• onye were gị n’ọrụ rịọrọ ka onye ọrụ ahụ kweta ịchụ ya;
• nkwekọrịta mmezi ahụ na-elebara oge ngosi;
• onye ọrụ ahụ nwere ike gosipụta na ya achọọla ma na-achọ ọrụ ọhụrụ.
Ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ, ịmekọrịta maka gị ma dozie nkwekọrịta izu niile maka gị. Anyị na-adụ ọdụ banyere ezi uche dị na nkwekọrịta mmezi ma mee ka idoanya doo anya. Anyị na-elekwa anya n'ihe ndị ị chọrọ ma hụ na ị ruru nke ọma. Mgbe ị na-emekọrịta nkata, anyị na-enyere gị aka inweta ezigbo ego maka ezigbo ọnọdụ ego